Faah faahin ka soo baxaysa qaraxyo is xig xiga oo ka dhacay Dalka Indonesia – Radio Muqdisho
Faah faahin ka soo baxaysa qaraxyo is xig xiga oo ka dhacay Dalka Indonesia
Qaraxyadan oo is xig xigay ayaa ka dhacay Dalka Indonesia ayaa geystay qasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac,iyadoo laamaha ammaanka dalkaasi ay la hadleen tirade ku waxyeelowday weeraradaasi.
Wakaaladda Wararka Reuters oo soo xiganaysa laamaha ammaanka dalkaasi ayaa soo warisay in ilaa 9 qof ay ku dhinteen 40 kalena ay ku dhaawacmeen ilaa sedex qarax oo naftii halignimo ah oo ka dhacay kaniisado kuyaala magaalada Surabaya oo ah magaalada 2-aad e ugu weyn dalkaasi.
Saraakiisha Booliska dalkaasi ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay dheceen muddo 10 daqiiqo gudohooda,waxaana lala beegsaday 3 Kaniisadood oo kuyaala magaalada Surbaya oo kutaala Jasiiradda Java ee dhinaca bari ee Dalkaasi indonesiya.
Waxaa laga cabsi qabaa in qasaaraha uu intaasi ka sii bato,iyadoo laamaha ammaankuna ay ka dhigayaa suuro galnimada in tirade ay kororto,sababo laxiriira awooda qaraxyadaasi iyo goobaha lala beegsaday oo mashquul xoogan uu ka jirey.
Muuqalo uu baahiyay Televeshinka Qaranka Dalkaasi Indonesia ayaa muujinaya dad badan oo isugu soo xuumay goobta qaraxyadu ay ka dheceen,iyadoo laga cabsi qabo in qarax kale uu yaalo Kaniisad Afaraad oo halkaasi kutaala,sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay saraakiil ka tirsan sirdoonka dalkaasi.
Wadanka Indonesiya oo ah wadanka ugu badan oo ay ku noolyihiin Muslimiinta adduunka ayaa waxaa uu la dagaalamaya ka hortaga weerarada argagixisanimo,wixii ka dambeeyey weerarkii 202 qof lagu dilay oo ka dhacay Jasiiradda Bali ee Dalka Indonesia oo kuyaala Koonfur Bari Qaaradda Aisa sanadka markuu ahaa 2002.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo saaka la wareegay deegaano ka tirsan Gobolka Hiiraan
Dhageyso Warka Subax ee Radio Muqdisho Axad 13-5-2018